IMT Vislink uye SpacePath Co-Chiratidziro kuAfricaCom 2018 - NAB Kuratidza Nhau neBroadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » nhau » IMT Vislink uye SpacePath Co-Chiratidziro paAfricaCom 2018
IMT Vislink uye SpacePath Co-Chiratidziro paAfricaCom 2018
KAPA TOWN, SOUTH AFRICA, NOVEMBER 7, 2018 - XG® Technology, Inc. ("XG") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), mazita avo anozivikanwa sevatungamiri venyika yose mumavhidhiyo mavhidhiyo aripo mumushambadziro, mauto ehurumende uye hurumende, anozivisa kuti yeImT Vislink bhizinesi iri kuratidzira ne SpacePath pa AfricaCom (Hall 4, Mira F21), iyo yakakura uye inotyisa zvikuru teknolojia uye nhepfenyuro ye telecom muvepanyika. IMT Vislink iri kuratidza iyo Advent MSAT-120 setiraiti vhidhiyo uye data sarudzo uye ViewBack low latency mimwe miviri yakasiyana-siyana inogamuchirwa-inodhi, asi SpacePath iri kuratidza huwandu hwesimba-refu (HPAs) uye pasi-simba simba rakasimba masimba amplifiers (SSPA / SSPBs).
"AfricaCom inounza pamwe chete nevanotarisana ne14,000 vanofarira kuwirirana kwehupfumi, kuvhiringidzika kwekombiyuta, nhare dze digital uye ICT urongwa, izvo zvinoita kuti ive chiratidzo chikuru kwatiri kuti tiise pachena setiraiti zvigadzirwa zvemakambani emhizha vashandi, "anodaro David Robins, Global Sales Director we IMT Vislink. "Vislink ane ruremekedzo rurefu semupi wepasi rose setiraiti inyanzvi yekukurukurirana uye nezvinodiwa zvakare kuAdvent line, inoramba ichipa mishonga yakasiyana-siyana, yakakwana uye ine mari inoshandiswa pamusika uyu. Nokubatana-kuratidzira ne SpacePath, tichavawo nemukana wekuratidzira sangano rekubatana kwedu rinopa mukati meAdvent yedu MSAT-120 setiraiti kuguma. "
The Advent MSAT-120 iyo inonyanya kutakura, inonzwisisika, katatu setiraiti chitubu chinogona kuiswa chero kupi zvako kupa nhare yakachengeteka uye isina kuchengeteka uye kutumira mavhidhiyo mumaminitsi mashanu. Inotsigira X-, Ku- neKa-band zvigadziriso zvichivimbisa kuti pasi rese inoparidzika inowanikwa panguva dzose. Inowanikwa ne65, 90 kana 120cm reflecteur, iyo yakagadzirirwa kushandiswa nokukurumidza munzvimbo dzine utsinye uye inogona kushandiswa nemasimba emagetsi kana basa rebheteri.
Yakapinda muAdvent MSAT-120 terminal, SpacePath's 60W 13.75-14.50GHZ SSPA icharatidzwa panguva yekuratidzwa. Uyewo, SpacePath ichave ichitanga imwe itsva kunze 12W 13.75-14.50GHz Fanless SSPB. Sezvo pasina mafambi mukuvakwa kwechigadzirwa, SSPB itsva isina simba inowedzera kuvimbika kwenguva refu kweyuniti uye inoderedza chero zvido zvekugadzirisa nguva dzose. SpacePath's range of high-power and low-power solid state power amplifiers, iyo inosanganisira bandu uplink seC, Ku, DBS na Ka ichange ichiratidzwa zvakare.
"Chiitiko ichi chinotipa mukana wakasiyana-siyana wokuratidza zvitsva zvedu setiraiti amplifier products uye sub-systems kumunharaunda, "anodaro Colin Bolton, Mutungamiriri we SpacePath Communications. "Kubatana kwedu naImT Vislink kunoshandisa teknolojia yezvino kubva kumasangano maviri."
The Vislink OnaBack isingarevi, pasi-simba, pasi-latency, kaviri-nzira dzakasiyana-siyana receiver-decoder, inonyanya kuda kupa kugamuchira kudzoka studio video kutumira zvakare kumerairi wekhamera. Kushanda mubato re2GHz-licensed, uyo anogamuchira anotsigira kukodzero kweLMS-T yakasimba yeVislink pamwe nekuderera kwekunonoka H.264 kududzira. Zvikamu zvinosanganisira HDMI uye HDSDI, iyo yekupedzisira ichishandura, mumashandisi asina kamera kamera, pakati pevhidhiyo yekamera yemunharaunda uye kudzorerwa kwakagamuchira video.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pe IMT Vislink uye SpacePath, simira naF Stand F21 kuAfricaCom kana kushanyira Www.imt-solutions.com, Www.vislink.com/ or www.space-path.com/.
XG Makambani emagetsi anopa mafirimu asingasviki mavhidhiyo ekuparadzira, kushandiswa kwemitemo nekuchengetedza kwemisika, uye mararamiro ehurumende yepamusoro ekubatanidza mabhadharo anoshandiswa mumamiriro ezvinhu akaoma. XG's brand portfolio inosanganisira Integrated Microwave Technologies (IMT), Vislink uye xMax.
IMT naVislink ndivo vatungamiri vatungamiri vehutachiona hwema digital microwave maitiro ekutora, kutumira nekugadzirisa kuchengeteka, yakakwirira, mavhidhiyo aripo. IMT naVislink vanovimbiswa nevashambadziri kumatare-1 pasi rese vatengi mukutambisa / mitambo / varaidzo, uye kuchengetedza mutemo / mararamiro ehupfumi nekuchengetedza. Zvigadzirwa zvavo zvinonzwisiswa nepamusoro maitiro ekushanda, kuvimbika, kuvaka huni, huwandu hwekushanda kwepamusoro uye zvikwata zvekugadzirisa mafomu. Mukushambadzira, mitambo uye yezorodhi, IMT neVislink vanopa huwandu hwemashoko ekukurukurirana hunoenderana nekunyatsounganidza kugovera uye kugovera zviitiko zvehupenyu. Mukumanikidzwa kwemitemo, mararamiro emagariro evanhu nekuchengeteka, IMT neVislink vanochengetedza vhidhiyo yekuchengetedzwa kwepamusoro uye zvinoparidzira zvirongwa kumasangano emunharaunda, enyika uye mapasi pose nemasangano. Mamwe mashoko anogona kuwanikwa pa Www.imt-solutions.com uye Www.vislink.com.
XMax ndiyo yakachengeteka, inokurumidza-inoshandisa mobile broadband system iyo inoendesa kushandiswa-kushandiswa kusina wireless kugadziriswa mune zvinoda kushandiswa kwemamiriro ezvinhu. XMax yakanyatsogadzirirwa kushanda senzira yekufambisa uye inoshandisa mitambo yekutaurirana kuti ishandiswe mumamiriro ezvinhu asingazivikanwi uye munguva dzemvura. Izvi zvinogadzirisa mhinduro inogadzirisa yekupindura kwemajodzi, kukurukurirana kwekukurumidzira, nekuzvidzivirira kwezvidziviriro. Mamwe mashoko pamusoro peXMax anogona kuwanikwa pa Www.xgtechnology.com/system-overview/. Mukuwedzera kune mabhizimisi ari pamusoro apa, xG ine Dhigiriro yeGermany Sector Group (xG Federal) inotarisa kupa zvizvarwa zvinotevera zvinokonzera kuparadzanisa kushandiswa kwenyika, tsvakurudzo yesayenzi uye mamwe masangano ehurumende. Zvimwe zvekuwedzera pamusoro peGG Federal zvinogona kuwanikwa pa Www.xgtechnology.com/technology/xg-federal/.
Kubva kuSarasota, Florida, xG Technology ine zvikwereti zve 100 uye zvinoshandiswa patent applications. XG inoshambadzirwa nekambani yakanyorwa pane NASDAQ Capital Market (chiratidzo: XGTI) Kuti uwane mamwe mashoko, ndapota shanya Www.xgtechnology.com.
Cautionary Statement Nezvekutarisa Kutarisa Zvinyorwa
Zvinyorwa zviripo pano izvo zvisingabvi pamusoro pemazuva ano kana zvakaitika kare zvinotarisa-kutarisa mumasikirwo uye zvinotanga zvinyorwa zvinotarisa mberi mune zvinoreva Chikamu XNUMA cheChishanu cheChishanu cheChitsuwa che27 uye Chikamu 1933E cheSturities Exchange Act ye21. Kutaura kwakadaro kunotarisa mberi kunoratidza izvo zvinotarisirwa neChitsuwa pamusoro pemigumisiro yaro yemangwana inoshanda, kushanda uye mikana inosanganisira ngozi huru uye kusava nechokwadi. Aya mazwi anosanganisira asi haasviki kune zvinyorwa pamusoro pezvakatarisirwa zvekupa, kuvhara kwekupa uye kushandiswa kwemari ipi zvayo kubva pane kupa. Apo rinoshandiswa pano, mazwi "tarisira," "tenda," "kuongororwa," "kuuya," "kuronga," "chinangwa", "chinangwa" uye "kutarisira" uye mazwi akafanana, sezvaanoenderana neXG Technology, Inc. , Vashandi vayo, kana masangano ayo, zvinotarisirwa kuzivisa zvinyorwa zvinotarisa mberi. Zvinyorwa izvi zvinotarisa mberi zvinotarirwa pamashoko iye zvino anowanikwa neKambani uye anozviisa pasi pengozi dzakasiyana-siyana, kusava nechokwadi, nezvimwe zvinhu zvinogona kukonzera mhinduro yekambani yeChishanu, kushanda, tarisiro, uye mikana yekusiyanisa zvinhu kubva kune izvo zvinoratidzwa, Kana kuti inotsanangurwa, idzi zvinyorwa zvinotarisa mberi.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering IMT Vislink Spears & Arrows Video Engineer	2018-11-07
Previous: EditShare Media Solutions Power New LG U + Kugovera Kupa "The Show"
Zvadaro: Product Engineer
Hey Buddy !, Ndakawana mashoko aya kwamuri: "IMT Vislink uye SpacePath Co-Exhibit kuAfricaCom 2018". Heino chibatanisi chebhuku rewebhu: https://www.broadcastbeat.com/imt-vislink-and-spacepath-co-exhibit-at-africacom-2018/. Ndatenda.